Gurigii Argaggaxa! Lammaane Xabsi daa’in lagu xukumay iyo Sababta | Aftahan News
Gurigii Argaggaxa! Lammaane Xabsi daa’in lagu xukumay iyo Sababta
April 20, 2019 | Filed under: Aragtida Bulshada,Qubanaha,Wararka | Posted by: Mursal
Maxkamdeynta Turpin: Lamaane xabsi daa’im loogu xukumay ‘tacaddiyo’ ay carruurtooda u gaysteen…..
Lamaanaha Turpins, ayaa ilmeeyay markii ay afar carruur ah oo ah dhaleen ka maqleen saameynta bayaankooda mar Jimcihii la dhageysanayay dacwadda. Canug yar ayaa ka sheekeeyay dhibaatada ku habsatay.
Louise iyo David Turpin oo Xabsi weligood ah lagu xukumay
Carruurtoodu maxay sheegeen?
“Kalmado kuma qeexi karno wixii aynu soo marnay intii aannu soo koraynay,” ayuu ku sheegay bayaankiisa. “Mararka qaar waxaan ku qarwaa waxyaabihii nagu dhacay sida in la katiinadeeyay walaalahay oo la garaacay.
“Taasi waa waxa aan soo marnay balse hadda waan sheekaynaynaaba. “Waan jeclahay waalindiintey waanan ka cafiyay dhammaan waxyaabihii ay nagu sameeyeen.”
Canug kale ayaa bayaan uu qoray oo uu walaalkeed akhriyay, waxa ay sidoo kale waalidiinteed kaga cafisay tacaddiyadii ay u gaysteen. “Labadeyda waalidba waan jeclahay,” ayey tiri.
“Walow aanay inoo soo korin sidii ugu wanaagsaneyd, haddana waan ku faraxsanahay in waxa ay nagu sameeyeen aan ku noqday qofka aan maanta ahay.” Hase-yeeshee, dhammaan carruurtu ma aanay wada qanacsanayn.
Gabadh jaraynaysay ayaa tiri: “Waalidiintay noloshaydii oo dhan bay la tageen balse hadda ayaan dib ula soo laabtay noloshaydii.
“Waxaan ahay dagaalyahan, waxaan ahay qof adag noloshana waan ka soo dhalaalayaa.”
Waxa ay intaasi ku dartay: “Waxaan arkay aabahay oo hooyaday badaley. Anigana waa ay I badeli rabeen, hasayeeshee waxaan ogaaday waxa soconayay.”
Waalidiintu maxay sheegeen?
David iyo Louise Turpin ayaa ooyay markii ay raaligelinta ka bixinayeen habka ay ula dhaqmeen carruurtooda.
Abaahan 57-jirka ah ayaa bayaan uu soo qoray waxaa akhriyay qareenkiisa isagoo sheegay: “Qaabka aan carruurtayda wax u barayay oo aan u tarbiyaynayay waxaan ula jeeday wanaag un.
“Weligay kuma aanan fakarin in carruurtayda ay wax xun ku yimaadaan. Waan jeclahay carruurteyda waxaanan rumaysanahay in carruurtayda ay I jecelyihiin.”
Waxa uu injineer u ahaa shirkado la shaqeya wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka oo lagu magacaabo Lockheed Martin iyo Northrop Grumman.
Iyadoo toos ula hadlaysay maxkamadda, ayey Louise Turpin, oo 50-jir ah, waxa ay sheegtay inay “aad uga xun tahay” waxa ay sameysay.
“Carruurteyda aad ayaan u jeclahay,” ayey tiri. “Waxaan sugayaa maalinta aan carruurteyda arki doono, hab siin doono oo aan u sheegi doono inaan ka xumahay wixii dhacay.”
Xaakimkii muxuu yiri?
Lamaanaha oo wajigooda ay murago ka muuqatay ayuu xaakimkii ku canaantay ficiladoodii “naf jeclaysiga, qaabdarrada iyo bini’aadamnimada ka baxsanaa”.
Xaakim Bernard Schwartz said: “Waxaad si khaldan u adeegsateen awooddii aad ku koriseen ee aad ku dhexgasheen carruurtiina aad idinka dhasheen ee aad dunidan keenteen.
Maxay carruurtu soo mareen?
Qoyskan dabaqadda dhexe ah ayaa ku noolaa gurigooda oo 112 km koonfurta ka xiga magaalada Los Angeles, iyadoo xilliga uu booliska gurigaasi galayayna ay da’da carruurtooduna ay u dhaxaysay 2 ilaa 29 sanadood, kuwaas oo ay macaluul ka muuqatay.
Wiil 22 sano jir ah ayaa waxaa la soo helay isagoo sariir ku katiinadaysan, halka laba gabdhood oo kalana ay jeebaysnaayeen.
Dhibannayaasha ayaa waxaa laga mamnuucay inay qubaystaan hal mar wax ka badan sanadkii, oo waxaanan u suuragelin inay suuliga isticmaalaan halka midkoodna uusan weligii tegin dhakhtarka ilkaha.